काठमाडौंमा पनि पस्यो खतरा ! ‘हाई अलर्ट रहनु’ भन्दै यस्तो सूचना जारी गरियो – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा पनि पस्यो खतरा ! ‘हाई अलर्ट रहनु’ भन्दै यस्तो सूचना जारी गरियो
काठमाडौंमा पनि पस्यो खतरा ! ‘हाई अलर्ट रहनु’ भन्दै यस्तो सूचना जारी गरियो
10,5182minutes read
काठमाडौंमा पनि बाढी र डुवानको खतरा रहेकाले सतर्क रहनु भन्दै सुचना जारी गरिएको छ । पछिल्लो ६ घण्टाको मापनले काठमाडौं उपत्यकाका धेरै स्थानमा भारी वर्षा भएको देखाएको छ। जसले गर्दा उपत्यकाका सबैजसो नदीका बाढी बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाले मंगलवार विहान करिब ११ वजे ट्विटरमार्फत दिएको सूचनाअनुसार मनोहरा, हुनमन्ते, नख्खुलगायत ललितपुर र भक्तपुर भई बहने प्रायः सबै नदीमा बाढीले खतरा तह आसपास पुगेको छ। तसर्थ नदीरनालाको पानी सडक र बस्तीसम्म आउन सक्छ, बेलुकासम्मै उच्च सतर्क रहन अनुरोध गरिएको छ।
यो अर्को समाचार, मुलुकभरी कहाँ कहाँ छ खतरा ?
काठमाडौं । दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश भेगको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ठाउँठाउँमा बाढीपहिरो गएको छ भने विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ । अहिले पनि भारी वर्षा जारी रहेकाले जोखिम उच्च हुँदा उचित सावधानी अपनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबारदेखि नै नारायणी नदी र कोशी नदीले खतराको तह पार गरेको छ । ठाउँठाउँमा डुबान शुरु भइसकेको छ । बाढी मापन केन्द्र देवघाटका अनुसार नारायणीको खतराको तह आठ मिटरको हो । बिहान ९ बजे नारायणी नदी ९ दशमलव ९ मिटरमा पुगेको छ । यस्तै कोशीको खतरा तह ११ मिटर रहेकामा अहिले नाघेर ११ दशमलव ९७ मिटरमा पुगेको छ । नदीको बहाव अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ । नारायणीका कारण सुस्तालगायत आसपास तल्लो र नदी तटीय क्षेत्र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका हाइड्रोलोजिष्ट सुनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मकवानपुरको मापन केन्द्रअनुसार पूर्वी राप्ती ९मकवानपुर र चितवन हुँदै बग्ने० नदीसमेत बढिरहेकाले सतर्कता तह नजिक पुगेको छ । आज उक्त नदी खतरातहसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा चितवनको सौराहा र आसपास क्षेत्र डुबानमा पार्न सक्ने छ । पूर्वी राप्ती ३ दशमलव ३० मिटर सतर्कता तह पार गरी ३ दशमलव ३६ मिटर पुगेको छ । यो नदीको बहाव ३ दशमलव ७० मिटर खतराको तह हो । यस्तै चितवनको माडीस्थित रिऊ नदी पनि बढ्ने क्रममा रहेकाले आज खतराको आसापास पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपत्यकाबाट वाग्मती र सहायक नदी तटीय क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा रहेकाले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । कन्काई, कमला, वाग्मती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका आसपासका सहायक नदीमा बहाव बढ्दो रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । तिनाउ खतराको आसपास पुग्ने, कर्णाली र महाकालीमा समेत बहाव बढ्ने छ ।
गोरखनाथ मन्दिरमा पुगेर भ्रष्टारचार गर्दिँन भनेर कसम खाएपछि मनोनयन दर्ता गरे यी नेताले
कास्मिरमा फेरी अर्का नेपाल घर भएका गोर्खा सैनिकले गु’माए ज्यान !
नायक प्रसान्त तामाङ्गको आमाको असमाहिक नि’धन दया हुनेले Rip लेख्नुहोस
दुवै मृगौला फेल भएर उपचाररत नेपाली युवाको इराकमा मृत्यु
‘पल शाह प्रकरणबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ’ भन्दै पल शाह प्रकरण बारे बोलिन नायिका सुरक्षा पन्त